Mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana feno - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana feno
Taorian'ny niaingan'ny fiaramanidina nitondra ny Papa ray Masina hitodidoha ho any Roma ny talata 10 septambra maraina dia nanolotra fisaorana sy fankasitrahana feno ampahibemaso teny Ivato ny Kardinaly Désiré Tsarahazana. Toa izao izany lahateny fisaoran a izany araka ny nandraisana azy.
Homba antsika mianakavy anie ny fiadanana !
Misaotra an’Andriamanitra isika fa tontosa antsakany sy andavany ny Fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Ray Masina Fransoa teto amintsika. Namafy fiadanana sy fanantenana teto amintsika izy tamin’ny alalan’ny famangiany, ny hafatra nomeny fa indrindra tamin’ny Eokaristia notarihiny teo anatrehan’ny vahoaka iray tapitrisa avy amin’ny diosezy 22 sy avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, vory lanona tao Soamandrakizay.
Samy faly isika rehetra satria nahazo tso-drano avy amin’ny Ray masina, isika sy ity Nosintsika ity. Tianay Evekan’i Madagasikara ny maneho etoana ny fisaorana mitafotafo sy ny fankasitrahana anareo rehetra izay nanampy anay mba ahatonga lafatra ny fandraisana azy. Singanina amin’izany :
1- Ny Filohan’ny Repoblika izay naneho ny maha raiamandrenin’ny Malagasy rehetra azy ka nandray tamin’ny fo tokoa io Mpiandry Ondry iombonana ao amin’ny Eglizy Katolika sady Filohan’ny Fanjakana Vatikana io, sy nanao izay hahalavorary ny fandraisana ny Papa tamin’ny lafiny maro mba tsy hampitsanga-menatra ny firenena malagasy ; nandray an-tanana ny fanajariana ny toerana hihaonan’ny vahoaka tamin’ny Papa, nanampy tamin’ny fampitaovana sy tamin’ny fanamorana ny fampitàna ny vaovao eran-tany amin’ny alalan’ny fitaovan-tserasera.
2- Ny Nonce Apostolique sy ny mpiara-miasa amin’ny izay nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka niaraka taminay Fivondronamben’ny Eveka sy ny fitondram-panjakana ka nahatontosa izao Famangiana apostolika nataon’ny Papa Fransoa izao.
3- Ny Praiminisitra sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta.
4- Ny mpandrindra ankapobeny ao amin’ny Fiadidiana ny Repoblika sy ireo mpiara-miasa aminy : ny logistique, ny arofenitra, ny serasera.
5-Ny mpitandro ny filaminana isan-tsokajiny, ny niandraikitra ny fahasalamana, ny fitaterana, ny mpanao lalana, ny jiro sy rano.
6- Ny Air Madagascar sy ny tompon’andraikitra rehetra tao amin’ny seranam-piaramanidina Ivato
7- Ny fiadidiana ny tananan’Ivato sy Antananarivo renivohitra
8- Ianareo mpiara-miasa akaiky aminay eo anivon’ny Fivondronamben’ny Eveka notendrenay hanomana ny Famangian’ny Papa : ny mpandrindra ankapobeny, ny Litorjia, ny serasera, mpandrindra diosezana, fahasalamana, ny Union des supérieurs majeurs, vovonan’ny Tanora, CEPAL ary indrindra ny volontaires.
9- Ny Diosezin’Antananarivo tarihin’ny Arseveka sy ny Eveka mpanampy, ny Vikera jeneraly, ary ny FFVA. Ireo Paroasy nandray ny mpivahiny avy any amin’ny Diosezy ivelan’Antananarivo.
10- Isaorana toy izany ireo olona tsara sitrapo rehetra nanampy tamin’ny soso-kevitra, nahafoy vola aman-karena sy fitaovana, indrindra ireo eo amin’ny sehatra tsy miankina (secteur privé), ny artistes.
11- Ny orinasa Karenjy nanao ny papamobile
12- Isaorana ireo mpanao gazety tsy an-kanavaka sy ireo tompon’ny fitaovan-tserasera nanaiky nampita sy nampiaina maneran-tany ity fitsidihana apostolika ity sy ny hafatry ny Papa.
13- Isaorana ireo mpiasa tsy an-kanavaka nandray anjara tamin’ny fanorenana foto-drafitrasa, tamin’ny fambolena ahitra sy tamin’ny fametrahana ireo estrades sy ny fandravahana ny toerana.
14- Isaorana ireo mpino rehetra na katolika na tsy katolika maneho fiombonana tamin’ireny fotoana ireny.
15- Farany, misaotra ny vahoaka malagasy rehetra tsy an-kanavaka maneho fahendrena malagasy (dia ny fihavanana, ny fahaiza-mandray vahiny) ary indrindra ny fiombonam-po tamin’ny fitsidihan’ny Papa Ray Masina.
Enga anie ho tafapaka any amintsika tsirairay sy any amin’ny isam-pianakaviana ny fiadanana sy fanantenana nafafin’ny Ray Masina Fransoa.
Mahafaly anay ny manambara aminareo fa maneho mivantana ny hafaliany sy ny fahafaham-pony ny Papa Fransoa na dia fotoana fohy aza no nihaonany tamintsika ary gaga izy nahita ny hafanam-pontsika sy ny firaisankinantsika ary ny fahaizantsika mandray vahiny.
Mitso-drano anareo izahay Evekanareo
Son Eminence le Cardinal Désiré Tsarahazana